एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा सपथ ग्रहण Bizshala -
कहिलेबाट आउला मध्यभोटेकोशीको सेयर कारोबारमा ? कहाँ पुग्यो सूचीकरणको प्रक्रिया ?
ओपो इन्नो डे २०२१ मार्फत अत्याधुनिक एनपीयू र नयाँ स्मार्ट ग्लास अनावरण गर्ने तयारीमा ओपो
एभरेष्ट बैंकले पायो रु. २ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति, ब्याज कति ?
ओमिक्रोन : फाइजरको बुस्टर डोजले सुरक्षा प्रदान गर्ने
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाण्डौ। एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष दिपककुमार श्रेष्ठले मंगलबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन्।
नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसमक्ष अध्यक्ष श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका हुन्। सपथ ग्रहणका अवसरमा बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठको समेत उपस्थिति थियो।
गत आइतबार बाराको सिमरामा सम्पन्न १२ औँ साधारण सभाबाट आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा दिपककुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको हो।
Asian Life Insurance Company Limited
नबिल डिजीबैंक पोर्टल सार्वजनिक, भीकेवाईसी र भर्चुअल आई–कार्ड सेवाको पनि सुरुआत
राष्ट्र बैंकले रु. २० अर्बको ट्रेजरी बिल्स सोझै खरिद गर्दै, आज बोलकबोल
सुन–चाँदीको भाउ आज स्थिर
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस कति ?
को हुन सक्छ सेयर बजारको नायक ?
प्रथम त्रैमासमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था कस्तो ?
ओपो इन्नो डे २०२१ मार्फत अत्याधुनिक एनपीयू र नयाँ स्मार्ट
शेङ्चन। नजिकिँदो ओपो इन्नो डे २०२१ मार्फत ओपोले आफ्ना नयाँ रणनीति...
सेञ्चुरी बैंकद्वारा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई न्यानो
काठमाण्डौ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैँक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक...
सिटिजन्स बैंकद्वारा मृतक ग्राहकको परिवारलाई रु. ८ लाखभन्दा
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको लघुवित्त...
हेफर इन्टरनेसनलद्वारा ४६ थान महिन्द्रा बोलेरो पिकअप
काठमाण्डौ । नेपालका लागि महिन्द्रा अटोमोबाइल्स र ट्रयाक्टरको...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र इसेवा मनी ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र इसेवा मनी ट्रान्सफरबीच ...
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङद्वारा इटहरीमा शाखा विस्तार
काठमाण्डौ । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले आफ्नो २२ औँ...
डिशहोम फाइबरनेटले ल्यायो सस्तोमा डाइनामिक कम्बो प्याक
काठमाण्डौ। डिशहोम फाइबरनेटले ‘डाइनामिक कम्बो प्याक’...
लक्ष्मी बैंकद्वारा २ नयाँ शाखाका साथै १ एक्स्टेन्सन काउन्टर
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा...